﻿स्तरोन्नतिका लागि पुर्वाधार र डिपीआर बिनै मुख्यमन्त्रीले किन गरे धनकुटा अस्पतालको उद्घाटन ? - Purbeli Nepal
मुख्यमन्त्री पद खुस्किन आँटेको बेला कात्तिक १ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई १०० शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिएको भनेर उद्धाटन गरे। तर जिल्ला अस्पतालका लागि न त आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन नै भएको छ, न डिपीआर नै तयार भएको छ ।
हाल १५ शैया रहेको धनकुटा अस्पतालको नाममा १६ रोपनी जग्गा मात्र छ । १०० शैयाको अस्पताल चलाउन कम्तिका ५० रोपनी जग्गा चाहिने धनकुटा अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. पुजन विश्वकर्मा बताउँछन् ।
धनकुटा अस्पताललाई स्तरउन्नति गर्न डिपिआरको लागि १५ लाख र भवन निर्माणमा १ करोड बजेट विनियोजन भएपनि जग्गा नभएकाले डिपिआरको काम नै अघि नबढेको डा. विश्वकर्माले बताए ।
धनकुटा अस्पतालसँगै रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र र रेशम विकास कार्यक्रमको जग्गा अस्पतालले लिएर काम गर्ने कि भन्ने कुरा भएपनि यकिन भने नभएको उनको भनाइ छ । १५ शैयाको अनुमति भएपनि जिल्ला अस्पतालमा ४० शैयासम्म चलिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। धनकुटा अस्पताललाई १०० शैयाको सञ्चालन गर्न हाल रहेको पूर्वाधारले मापदण्ड अनुसार नसकिने अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. विश्वकर्मा बताउँछन।
सरकारी मापदण्ड अनुसार १०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न विभिन्न ८ वटा विभाग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । १०० शैयाको अस्पतालमा बालरोग, स्त्रीरोग, मानसिक रोग, फिजिसियन, छाती रोग, हाड रोग, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ आवश्यक हुन्छ। तर, हाल धनकुटा अस्पताल विगत २ वर्षदेखि नै निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। नवौँ वा दशौँ तहको मेडिकल सुपरिटेण्डेनको दरबन्दी रहेपनि हाल आठौँ तहको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
हुन त जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नती गर्ने चर्चा २०७२ सालदेखि नै चल्दै आएको हो। अहिले पनि कुनै पूर्वाधार विना नै जस लिनका लागि हचुवाको भरमा मुख्यमन्त्रीले आचार्यले १०० शैयाकै अस्पताल उद्घाटन गरेका छन् । धनकुटा अस्पतालको स्तरोन्नती भएमा पूर्वी पहाडका धनकुटा सहित तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाबासीलाई उपचारमा सहज हुनेछ ।